Nanazava ny tompon’andraikitra teo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana fa noho ny fahanteran’ny lokomotiva no antony. Nampikaikaika an’ireo olona tsotra mivezivezy sy mivarotra, indrindra ireo mpandraharaha ny fahatapahan’ny lalana. Ankoatr’izay dia tena nanimba tanteraka ny sehatry ny fizahantany izany ary maro tamin’ny mpizahatany na ny eto Madagasikara ihany na ny any ivelany no tsy te hiverina any intsony nahita ny olana. Hatreto aza moa dia tsy sahy mankany ny mpizahatany ary tena vitsy amin’izao andro fialantsasatra izao. Nanambara ny teo anivon’ny minisiteran’ny fitaterana fa tsy maintsy vitaina mialoha ny faran’ny taona 2019 ny fanarenana io zotra an-dalamby mampitohy an’i Fianarantsoa sy Manakara io. Efa nahazoana alalana sy nankatoavin’ny tetibolam-panjakana 2019 ny fanafarana lokomotiva miisa 2 ary eo an-dalam-pikirakirana izany ny teknisiana amin’izao fotoana ahafahana mampiasa azy.